21 Jun, 2014 - 17:06	 2014-06-21T17:12:12+00:00 2014-06-21T17:12:12+00:00 0 Views
MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: [email protected] kana kutumira sms panhamba dzinoti: 0714 200 007.MAKADINI? Ndine makore 30 nemwana 1 uye ndinotsvakawo murume ane makore 33 zvichienda mberi. Ngaandibate pa0783 370 296.
Ndiri kutsvaka mukadzi wekugara naye akanaka ane mwana wake 1, ini ndine vaviri. Ndine makore 38 ekuberekwa kana aripo ngaandibate pa0783 138 463 izvozvi.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 2, ndinotsvagawo murume anoda zvekuvaka musha ane makore 38 kusvika 45 ari HIV negative. Ari pachokwadi ngaafone pa0777 774 654.
Ndiri shirikadzi iri kutsvagawo murume akafirwawo asiri pachirongwa, ndine makore 48 zvichienda mberi. Vanoda ndibatei pa0734 856 136.
Ndiri mukadzi ane makore 35 nemwana mumwe chete ndinoshanda uye ndinonamata. Ndiri pamaARV’s, ndiri kutsvaga murume ari pachokwadi anonamata. Vanoda ndibatei paWhatsApp pa0778 911 545.
Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndinoda musikana ane makore 18 kusvika 22 anogara kumusha. Anoda ngaafone pa0739 516 821.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndiri kutsvagawo musikana akavimbika ane makore 19 kusvika 23. Anoda ngaandibate pa0733 143 728, ndatenda.
Ini ndiri murume ane makore 33 okuberekwa, handina chirwere uye ndinotsvakawo mukadzi ane mwana kana musikana anoda zvekuroorwa ane makore 28 -31. Anenge andifarira ngaandibate paWhatsApp pa0778 880 663.
Makadii veKwayedza? Ndiburitsireiwo mubepanhau, ndiri musikana ane makore 19 uye ndiri kutsvagawo mukomana ane makore 25 zvichidzika wekushamwaridzana naye. Ndinogara muHarare, anoda ngaandibate pa0738 521 209.
Ndinotsvagawo murume anoda zvekuvaka musha ane makore 25 kusvika 30 asi kwete mapositori. Ndine makore 22 nemwana 1, akasununguka kunotorwa ropa ngaandibate pa0778 047 296, macall back kwete.
Ndiri musikana ane makore 20 ndinotsvakawo mukomana ane makore 23 – 28 ari pachokwadi, handidi macall me back. Anoda anondibata pa0771 742 830 kana kutumira sms.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 37 nevana 2 ndiri positive uye ndinoda murume ane makore 45 kusvika 55, kunyanya vanofarira kurima nevane zvavanoita muhupenyu. Handidi vemuedzo, vanondida ndibatei pa0773 170 066.
Ini ndiri murume ane makore 28 ndinotsvakawo musikana ane makore 18-27 anogara kuChegutu wekuroora. Anoda ngaafone kana kutumira sms panhamba idzi 0716 555 015.
Ndinogaronyorera asi hamundibuditsewo, ndapota. Ndiri murume ane makore 31 nemwana 1 uye ndinodawo mudzimai ane makore 30 zvichidzika ane mwana 1 kana asina. Ndibatei pa0774 129 942.
Ndiri musikana ane makore 25 ndinotsvagawo mukomana anoshanda ari positive sezvandiri. Matsotsi kwete, vamwe ndibatei pa0715 020 916.
Ndiri murume ane makore 37, HIV positive uye ndinoshanda muhurumende. Ndinoda mukadzi asina mwana ari positive ane makore 20 kusvika 37 anonamata, mushandi wehurumende. Kunyangwe asingabereke ngaandibate pa0713 837 684.
Ndiri mukomana ane makore 27 ndiri kutsvaga musikana ane makore 18 kusvika 24 akanaka. Ndibatei pa0779 763 603.
Ndiri murume ane makore 33 nemwana mumwe chete ndiri kutsvagawo mukadzi anoda zvemba akanaka anogeza uye ane hunhu chaiwo ane makore 25 kusvika 29. Nhare dzangu 0737 417 438.
Makadii vekwayedza? Ini ndinotsvakawo musikana ane makore 20 kusvika 26 ava kuda kuroorwa. Nhamba dzangu 0783 388 387 asi kwete call me back.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 4 ndinotsvaga murume ane makore 40 kusvika 50, anonamata ari pachokwadi. Asinganwi doro ngaandibate pa0774 826 821.
Ndiri mudzimai ane makore 41 nevana 3 ndinotsvaga murume ari HIV positive asi asingaratidze kurwara anotya Mwari. Nhamba dzangu dzinoti 0778 279 648.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 28 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 26 zvichidzika anonamata nekuti ndinonamata. Tozotaura zvakawanda ndibatei pa0715 621 328, ndatenda.
Makadini veKwayedza? Ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 30 kusvika 45. Ini ndine makore 32 uye ndiri negative. Anoda zvemba ngaafone pa0735 320 283.
Ndiri mukadzi ane makore 31 nevana vaviri uye ndinoda murume wekuwadzana naye anondipa rudo neni ndichimudawo. Ndinogara kuMasvingo, vanoda nhare dzangu 0783 617 660.
Ndiri musikana ane makore 19 ndinotsvagawo mukomana ane makore 25 – 28 ari pachokwadi nekuvaka imba. Fonai pa0735 245 938.
Ndiri mukadzi ane makore 45 ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 46 kusvika 55 asina mukadzi. Akafirwa pamwe chete nematsotsi kwete. Vari pachokwadi chete ndibatei pa0716 453 851.
Ini ndiri mukomana ane makore 26 okuberekwa ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi anoda zvemusha anotya Mwari ane makore 19-24. Fonai pa0739 755 933.
Ndiri mukadzi ane makore 34 ndiri positive uye ndinodawo murume akaita seni. Ndiri muGweru, vanoda nhare dzangu 0771 325 024.
Ndinotsvagawo murume ane makore 29 – 31 anoshanda asina mukadzi, anotaridzika. Ndine makore 20, nhare dzangu 0717 198 454.
Ndiri murume ane makore 31 ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 25 kusvika 28 ari HIV positive.
Nhamba dzangu 0737 604 496, ndakambonyorera ndakasangana netsotsi. Handidi call me back.
Ndiri mukomana ane makore 28 ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 27 chero ane mwana. Ndinoshanda mushopu, nhamba dzangu 0717 282 709.
Ndiri mudzimai ane makore 31 nevana 2 uye ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane makore 35 – 45. Akarongeka nhamba dzangu idzi 0738 373 234.
Ndiri mudzimai ane makore 42 nevana vaviri ndinodawo murume anondipa rudo rwechokwadi ane makore 50 zvichienda mberi. Angada kuti tigarisane ngaatumire sms kana kufona pa0714 598 259.
Ndiri murume ane makore 43 ndiri murimi uye ndinoda mukadzi akarongeka anoshanda ane makore 35 zvichikwira. Ndine vana vaviri vane, nhare dzangu 0777 278 786.
Ndiri murume ane makore 34 nemwana mumwe uye ndiri kutsvagawo mukadzi ane mwana mumwe kana musikana ane makore 25 kusvika 30. Ndinoshanda, ndinoenda kuchechi uye ndiri kusangana nematsotsi havatauri pachokwadi. Anoda zvemba zvekuroorwa ngaandibatei pa0733 813 867 asi handidi macall me back.
Ndiri mukomana ane makore 31 ndinotsvagawo munhukadzi ane makore 25 asina chirwere. Ngaafone pa0778 791 959.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ari pachokwadi. Anoda ngaandibate pa0783 258 049.
Ini ndiri musikana ane makore 16 ndinotsvagawo shamwari dzechikadzi dzine makore 16 — 18. Vanoda ndibatei pa0783 374 040 asi vanoita zvechipfambi, vanobhipa nemacall me back regai henyu.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe chete ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 40 – 50. Ndibatei pa0773 372 167.
Makadii henyu? Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 23 zvichidzika. Anoda ngaandibate pa0738 716 265 asi macall me back kwete.
Ndiri mudzimai ane makore 35 ndiri kutsvaga murume wekushamwaridzana naye ane makore 40 kusvika 55. Nhamba dzangu dzinoti 0773 766 712.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinoda musikana ava kuda zvemusha ari pachokwadi. Anoda nhare dzangu 0783 374 854.
Ndiri mukomana ane makore 31 ndinotsvagawo munhukadzi ane makore 25 zvichidzika asina chirwere. Ndibatei pa0778 791 959.